အချစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ ကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲ (၇) ခု | Duwun
အချစ်နဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါ အရာရာ လှပသွားတယ်။ တစ်လောကလုံးမှာ ပျော်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေသလို နေရောင်ခြည်နဲ့ လေထုကအစ ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ စိတ်တင်ပဲလား? မဟုတ်ဘူး.... ခန္ဓာကိုယ်မှာပါ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်အောင် အချစ်က စွမ်းအားကြီးလွန်းပါတယ်။
၁။ ပျော်ရွှင်တဲ့အချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တော် အထီးကျန်သမား(FA) တွေ၊ အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲခဲ့သူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အချစ်ရှိသူတွေက ပိုပြီးကျန်းမာကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ချစ်သူတွေဆိုတာ အပြန်အလှန် နားလည်ဂရုစိုက်တတ်ကြတာကိုး။
၂။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ထိတွေ့မှုတွေက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေကို ပိုထွက်လာစေတယ်။ စက္ကန့် ၂၀ လောက် ပွေ့ဖက်ထားရုံနဲ့ အောက်ဆီတိုစင်ဟော်မုန်းတွေ သိသိသာသာ ထွက်ရှိလာပါတယ်။
၃။ သင် သိပါသလား? ချစ်သူရဲ့ဘေးမှာအိပ်ရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် အိပ်ပျော်နိုင်ပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်လည်း အိပ်ပျော်နိုင်ပါတယ်။ အထီးကျန်သမားတွေကတော့ သနားစရာပေါ့လေ။
၄။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို အကြည့်များလို့ မျက်စိကိုထိခိုက်လာရတာ မနည်းပါဘူး။ ကိုယ့်ဘေးမှာသာ ချစ်သူလေးရှိနေရင် သူ့ကိုပဲ ကြည့်နေတော့မှာပေါ့။ ချစ်သူထက် ဖုန်းကိုပိုကြည့်နေရင်လည်း တကယ်ချစ်တာမဟုတ်လို့ဘဲ။
၅။ အလုပ်၊ အိမ်၊ လေ့လာစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ သမားရိုးကျဘဝဟာ ချစ်သူရှိလာတဲ့အခါ ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်သွားဖြစ်လာတယ်။ ခရီးတွေလည်း အတူသွားဖြစ်ကြတယ်။ ခရီးထွက်တာက ကိုယ့်အတွက် ကောင်းတဲ့အရာပဲမဟုတ်လား။
၆။ နောက်ထပ် ကောင်းကျိုးတစ်ခုကတော့ ပိုပြီးကြင်နာတတ်လာတာပါပဲ။ တကယ့်အချစ်ကို ခံစားမိတဲ့အခါ စိတ်က အေးချမ်းနူးညံ့လာတယ်လေ။ ဒေါသကြီးတတ်လွန်းသူတွေဟာ အချစ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးနောက် သိမ်မွေ့သွားကြရော။
၇။ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေလည်း ရှိလာတယ်။ ကိစ္စအတော်များများကို အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြလေလေ အချစ်ရေးက ပိုခိုင်မြဲလေလေပါပဲ။ အရင်တုန်းကဆို စိတ်ရှုပ်လွန်းလို့ ဘာလုပ်လုပ်တစ်ယောက်တည်းပဲလုပ်ခဲ့တာလေ။